Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Onye Chineke Bụ -> Chineke
Chineke: [Onye Chineke Bụ]
Jisọs Ọkpara Chineke na-enwụpụta ebube Chineke. Ihe Jisọs bụ na ihe nile o mere gosiri na ọ bụ Chineke nꞌonwe ya. Jisọs na-esite nꞌike aka ya na-achị eluigwe na ụwa nile. Jisọs bụkwa onye ahụ nwụrụ ka ọ sachapụ ma hichapụkwa mmehie anyị nile. Mgbe o mechara nke a, ọ nọdụrụ nꞌebe nsọpụrụ dị elu, nꞌakụkụ Chineke onye dị ukwuu, nꞌeluigwe.
1 JỌN 1:5
Nke a bụ ozi ahụ anyị nụrụ site nꞌaka ya, nke anyị na-ekwusakwara unu. Chineke bụ ìhè, ọchịchịrị ọ bụla adịkwaghị nꞌime ya.
Nke a bụkwa ụzọ ndụ ebighị ebi ahụ. Ka mmadụ mata na ọ bụ nanị gị bụ Chineke nꞌezie, ka ha matakwa na Jisọs Kraịst bụkwa onye ahụ i zitere nꞌụwa.
Abụ m Alfa na Omega, Mmalite na Ọgwụgwụ, Onye buru ụzọ dịrị na onye na-adịgidekwa.
 Mgbe m hụrụ ya, adara m nꞌala nꞌụkwụ ya dị ka onye nwụrụ anwụ. Ma o weere aka nri ya metụ m nꞌahụ gwa m okwu sị, “Atụla egwu. Abụ m Mmalite na Ọgwụgwụ ihe nile. Abụ m onye ahụ nwụrụ anwụ, ma na-adị ndụ. Ugbu a ana m adị ndụ ruo mgbe nile ebighị ebi. Ọ bụ m ji igodo ọkụ ala mmụọ na ọnwụ. Atụla egwu!
 Ihe nile ọ bụla e dere nꞌakwụkwọ nsọ bụ ihe si nꞌuche Chineke pụta. Ọ bakwara uru izi anyị ihe bụ eziokwu, na ime ka anyị mata ihe dị njọ na ndụ anyị. Ọ̀ na-enyere anyị aka iguzozi nke ọma, na ime ihe dị mma. Ọ bụ ụzọ Chineke họpụtara ime ka anyị bụrụ ndị a kwadobere nke ọma nꞌụzọ nile, na ndị e mere ka ha bụrụ ndị jikeere ịrụ ọrụ ọma nye onye ọ bụla.
 Mụ na Nna bụ otu.” Mgbe ahụ ndị Juu tụtụlitere nkume ọzọ ịtụ ya. Ma Jisọs jụrụ ha ajụjụ sị, “Arụrụ m ọrụ ebube dị iche iche site nꞌaka Nna m inyere ọtụtụ mmadụ aka. Ọ̀ bụ nꞌihi ọrụ ebube nke ole ka unu ji chọọ ịtụ m nkume?” Ndị Juu zara ya sị, “Anyị achọghị ịtụ gị nkume nꞌihi ọrụ ọma ị rụrụ. Kama anyị chọrọ ịtụ gị nkume nꞌihi na gị, bụ mmadụ efu, na-eme onwe gị dị ka Chineke.”